Shirkadda Hormood Oo Soo Bandhigtay khasaare iyo Dhibaato Lagu Hayo Shaqaalaheedda iyo Xarumaheedda | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Shirkadda Hormood Oo Soo Bandhigtay khasaare iyo Dhibaato Lagu Hayo Shaqaalaheedda iyo Xarumaheedda
Muqdisho (SDWO): Shirkadda isgaadhsiinta telefoonadda Hormood oo ka hawl gasha goboladda koonfurta iyo badhtamaha Soomaaliya ayaa ka hadlay tacadiyo loo gaystay shaqaalahoodda iyo xarumaha shirkadaasi.
Saamileyda shirkadda Hormood oo kulamo kala duwan maanta ku qabtay magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, Beledweyne iyo Beledxaawo ayaa ku eedeeyay ciidammada Kenya inay si ula kac ah u burburiyeen xarumo shirkaddu ay ku lahayd gobolka Gedo gaar ahaan aagga ku teedsan xudduuda ay wadaagaan labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya.
Yaasin Xasan Yuusuf oo kamid ah saraakiisha shirkadda Hormood ayaa ka warbixinaya khasaaraha ka dhashay xarumaha la burburiyay. “Khasaaruhu wuu kala duwan yahay, waxaa se ugu culusu khasaare nafeed oo shirkadda waxaa ka dhintay shaqaale ka hawl gelayay xarumaha la bur-buriyay.
Waxa kaloo jira lacag malaayiin dollar ah oo qaarna ay shirkadu dhaqaale u watay, qaarna dakhli soo geli jiray uu ahaa. Waxaa sidoo kale uu khasaare balaadhan oo malaayiin dollar ah uu soo gaadhay ganacsatadii gobolka Gedo ka hawl gasha oo dhaq-dhaqaaqoodda ganacsi isku waydaarsan jiray adeega lacagaha la isugu diro ee EVC Plus loo yaqaano”ayuu yidhi Yaasiin Xasan Yuusuf, oo la hadlay BBC.
“Dhimashadda waxaa naga dhintay hal qof oo shaqaale ahaa, oo nin injiineer ahaa, oo isagoo shaqadda ku jiray dhintay. Laakiin dhimashadu intaa way ka badan tahay oo dadka gobolku waxay noo sheegeen hal qof oo kale.
Ilaa afar xarumood oo ay leedahay shirkadda Hormood ayaa la bur-buriyay gobolka Gedo sanadkii hore iyo sanadkan aan ku jirno, waxaanu Yaasiin Xasan Yuusuf si cad ugu eedeeyay in xad-gudubyadaas ay gaysteen ciidamadda dawladda Kenya oo goboladda Gedo iyo Jubadda Hoose ka hawl galla.
“Xad-gudubyadaas waxaa gaystay ciidamadda dawladda Kenya, waanay cadahay oo dadka degaanku aad ayay arrintaa u hadal hayaan. Waana ciidamo baabuur wata oo xadka ka soo tallaaba, oo waxyeelo u gaysta degaanadaasi. Hadda gaar ahaan waxyeeladani waxay ku waajahan tahay xarumaha shirkadda Hormood oo la bur-burinayo”.
Geesta kale masuulkan u hadlay shirkadda Hormood oo la waydiiyay in dhibaatadan shirkadoodda loo gaystay ay la wadaageen dawladda ama ciidamadda Kenya ama midawga Afrika ama dawladda Soomaaliya.
Waxa uu ku jawaabay “Jihooyinka rasmiga ah oo dhan waanu la wadaagnay, hay’adaha kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya. Waxa kaloo aanu la wadaagnay hay’adaha caalamiga ah ee ay ka midka tahay AMISOM.
Waxa kaloo aanu gabood-faladan hore ula wadaagnay dawladda Kenya oo xidhiidho hore lala sameeyay”.
Waxaanu intaa ku daray in aanay ilaa hadda wax jawaaba ka haynin dhamaanba dhinacyadda ay arrintani khusayso ee ay dacwadoodda gaadhsiiyeen, “Ilaa hadda wax jawaab ah oo aanu ka hayno ma jirto, laakiin waxaanu ka sugaynaa jawaab taban dhimaanba dhinacyadaasi aanu la xidhiidhnay in ay na siin doonaan”ayuu yidhi masuulkan u hadlay shirkadda Hormood.
Dhinaca kale af-hayeenka wasaaradda gaashaan dhigga Kenya oo ay cabashooyinkaasi wax ka waydiisay BBC wuxuu sheegay in ilaa haatan aanay jirin wax cabasho ah oo soo gaartay oo ku saabsan eedaynta shirkadda Hormood.
Waxaanu intaasi ku daray in ay jawaab ka bixin doonaan marka ay cabasho soo gaarto.